Ubuhle bomfazi Iifake Amehlo Oluhlaza
Emva kokuba wenze ukulungiswa komgangatho, unokuguqulwa kwaye ukhangele ngakumbi. Umbala wamehlo aluhlaza uthathwa njengesipho, ngenxa yokuba ubuhle babo buyahlukahlukana ngama-shadow shades of shadows. Ingaba yi-turquoise, i-emerald, i-peach shade kunye nabanye abaninzi. Xa ukhetha izithunzi zamehlo aluhlaza, zama ukusebenzisa i-chocolate shades, uhlaza okomnyama okanye ubhedu. Ngesiseko sokwenza iliso, sebenzisa i-peach shades okanye i-brown ngokudibanisa iitoni ezimnyama. Kwakhona, unako ukudibanisa le mibala kunye ne-shadow shades egcwele.
Ukuba uya kukwenza i-evening making-up, sebenzisa ientyatyambo ezibomvu, zetsimbi okanye ezibomvu. Baya kugxininisa ubuhle bamehlo aluhlaza. Ukuze ubuhle, khetha itoni yegolide okanye yobhedu.
Umbala wePinki uthathwa njengomthunzi ongenakwenzeka. Ngokukhawuleza awukwazi ukukhetha umbala obomvu ofanelekileyo emehlweni akho, oku kuya kuthatha ixesha. Kukholelwa ukuba ukhetho lomthunzi luxhomekeke kumbala wesikhumba kunye neenwele. Kanti ungabi nengozi ngemibala e-silvery, shiya le mibala yabasetyhini ngamehlo aluhlaza.
Ungasebenzisi i-eyeliner emnyama okanye ipensela yamehlo aluhlaza. Uyakuthanda i-tshokoleta okanye ipensele emnyama kunye negrey. Ukuba ufuna ukwandisa amehlo akho uya kunceda ipensele yegolide okanye emhlophe.
Musa ukusebenzisa izithunzi ezenziwe ngokugqithiseleyo umbala wamehlo akho. Uyakudibanisa, kwaye umbono wakho uya kulahlekelwa ukuphelela.
Ukuba udinga ukwenza ukwakheka kwemini, sebenzisa isiseko esisezantsi okanye sisezantsi kwaye usebenzise kuzo zonke iipilisi. Qala nge-crease ephantsi uze uphele ngethambo elincinci. I-Peach shades okanye igrey nge-touch of brown, faka phezulu kwiseko kunye nomthunzi.
Ukuba ufuna isidlo sangokuhlwa kwamehlo akho aluhlaza, unokufaka isicelo nakwizithunzi ezimnyama.
Ukuba wenza iifom, umzekelo kwinqanaba elimnyama, udwebe umbala oluhlaza ogciniweyo phezu kwekhosidi yangaphakathi. Uyakubona ngokukhawuleza ukuba umbala ogqamile wenziwe njani.
Uhlobo oluthile oluxhamlayo lokubumba kwamehlo aluhlaza, ukusetyenziswa ngokupheleleyo kumbala wegolide.
Ukuba ufuna ukunika amehlo akho aluhlaza i-emerald hue, sebenzisa i-terracotta okanye izithunzi ezimnyama ezimnyama.
Ukugqiba i-makeup yakho usebenzisa i-mascara. Ngoku ke i-eyelashes enefestile kakhulu enefestile.
Siyabulela iingcebiso zethu malunga nendlela yokwenza ama-green eye , unokwenza ulungelelwano olugqibeleleyo kwaye ubonise ngokucacileyo konke ubuhle bamehlo aluhlaza.
Indlela yokwenza iimfono kwamehlo aluhlaza
Ixesha lokunakekelwa kwesikhumba eluncedo
Ukunyamekelwa kweenyawo, imilenze emihle
Indlela yokulahlekelwa isisindo emsebenzini wokuhlala
Kutheni amaqabunga aphuzi kwi-ficus?
Tartar nge rhubarb
Ubuhlobo obuhle phakathi kwendoda nomfazi
Bosu-hemisphere: isicelo kunye nemisebenzi
Skewers of carp
I-Orange biscotti eneenantsi
Indlela esheshayo yokutshisa iikhalori
Inkukhu ye-inkukhu kunye nemifuno kunye noshizi
I-tsokolate emnyama ithintela njani umzimba womntu?
Iibhola zezilwanyana ezivela kwenkomo yomhlaba
UDenis Klyaver wabonisa bonke abantwana bakhe kanye, isithombe
I-Halibut iphosa ngobisi bekakhukhunathi